Tag: data sainzi | Martech Zone
Tag: data sainzi
Makore apfuura, ini ndaifanira kuita ongororo hombe yemari kukambani yangu kufanotaura kana kuwedzerwa kwemubhadharo kunogona kudzora mushandi, mari yekudzidzira, kugadzirwa, uye hunhu hwese hwevashandi. Ndinoyeuka ndichimhanya uye kuyedza akawanda mamodheru kwemavhiki, ese achigumisa kuti paizove nekuchengetedza. Wangu Director anga ari mukomana anoshamisa uye akandikumbira kuti ndidzokere ndonovaongorora imwezve nguva isu tisati tasarudza kurova mibairo yevashandi mazana mashoma.
Akaita Sei Makuru Ekuongorora data Akave Akakosha kune DSPs
Monday, May 8, 2017 Chipiri, May 9, 2017 Firipi Kushmaro
Big data analytics rave dombo repakona kune zvinobudirira kushambadzira zvirongwa uye adtech kwemakore akati wandei ikozvino. Iine zviverengero zvekusimudzira iyo pfungwa yeakakura data analytics 'kushanda, iri nyore pombi yekufungira mukati mekambani yako, uye zvingangoita kuti iwe utaridzike kuve wakanaka kune uyo akaikurudzira. Big data analytics inoongorora yakakura swaths yedata (sezita zvarinoreva) uye inobvumira vaongorori kuti vashandise iyo data
10 Maitiro Ekutarisa muDhijitari Kushambadzira ya2016
NeChishanu, Kurume 18, 2016 Chishanu, Mbudzi 17, 2017 Douglas Karr
Tine huru yekushambadzira podcast inouya kwatinokurukura shanduko dzinoshamisa dziri kuitika mukati mezvemukati mekutengesa nzvimbo yedhijitari kushambadzira. Asi kushambadzira kwedhijitari kuri kuenderera mberi nekuchinja kunoshamisa zvakare. Iyi infographic kubva kuCube inonongedzera ichangoburwa iyo vashambadzi vanofanirwa kunge vachicherekedza muna 2016. Heano gumi Maitiro muDhijitari Kushambadzira Kudzoka paInvestment - iyo infographic inotaura kupfuura kupfuura zvisina maturo metric senge traffic uye masheya, asi
Kutambudzwa Kwemvura - An Analytics Analogy Inoenda Bhiriji Zvakanyanya
Chitatu, Nyamavhuvhu 12, 2015 Jim Sterne
Dhata, semvura, inouya nenzira dzakawanda. Pfungwa dzevanhu dzakashanduka kusefa kunze kwakawanda kwedatha anouya nenzira yedu nekuti pane zvakawanda zvacho. Paunovhura maziso ako nenzeve, data iri kwese kwese. Ruvara rwemadziro, ruzha rwemhepo inonhuhwirira uye hwema hwekofi yemuvakidzani wako zvinotorwa senge hunyoro. Mvura iri mumhepo nguva dzose asi haina basa